“Spiruline”, azo anesorana ny mony
Entina miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo sy mampatanjaka, no tena antom-pisian’ny “spiruline”. Azo ampiasaina hanalana mony sy hanatsarana ny hodi-tava ihany koa anefa ity karazana lomotra ity, rehefa ampiasaina ho maska.
- Yaourt tsy mamy : 2sk
- Vovoka spiruline : 2sk
- Tantely : 1sk
Fanamboarana sy fampiasana azy
Atambatra ny fangaro rehetra, aroina tsara mba hitambatra. Raha efa izay dia ahosotra amin’ny tarehy maina sy efa avy nodiovina mialoha. Alona 15 mn na andrasana ho maina dia kobanina amin’ny rano matimaty. Tokony tsy hangirana intsony ny tarehy ary koa tsy dia ho tazana loatra ireo tsimetimety eo aminy, rehefa avy manao ny maska.
Mety, na ho an’ny hoditra matavy, na ho an’ny hoditra makiana, ity maska ity, fa ny hoditra misy mony no tena tsara indrindra ampiasana azy satria manafina ireo tsimetimety amin’ny hoditra izy. Tena mety hitsaboana ny mony vokatry ny fahamaotinana na ny fikorontanan’ny tsirim-panentana mantsy ny “spiruline”, hoy ny mpikaroka. Miady amin’ny fahanterana ihany koa ny “spiruline” ary manala ny bongo sy mangana eo ambany maso. Marihina fa tsara foana ny manandrana ampahany kely amin’ny tarehy rehefa manao maska, na akora natoraly toy izao aza no ampiasaina, sao sanatria tsy mahazaka ny hoditra.